संविधान सभा-२ को तयारी तिब्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आफ्नो पार्टीलाई कसो गरी सजिलो हुन्छ भनेर सोच्ने र त्यसतर्फ उद्दत हुने कुरा त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अघिल्लो संविधानसभा कम्युनिस्टमय बनेको थियो । कम्युनिष्टहरुले दुइतिहाइ...
विश्वभर आफ्नो सञ्जाल रहेको गर्व गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रभित्रै मक्किसकेको छ । गुट फूटको राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय प्रभावले गाँजेको एनआरएनको विवाद अहिले आएर छताछुल्ल भएको हो । अधिकांश नेपालीहरुको बाहुल्य रहेका देशहरु...
एमालेको नाममा भएको 'ले' को अर्थ नै 'लेनिनवाद' हो । यदि लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नमान्ने हो भने पार्टीको नाम चाहिँ लेनिनवादी नै राखिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । त्यस्तोबेला पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावी दृष्टिकोणले...
खासगरी मेरा मित्र प्रकाश राना र गोरखा सैनिक आवाजका अतिथि सम्पादक नरेश खपाङ्गी मगरले बेलायत आउनैपर्छ भनेर मलाई उक्साएका थिए । उहाँहरू दुबैको कुरो थियो, 'तपार्इ रात दिन 'गोरखा-गोरखा' भनेर लाग्नुभएको छ, कम्तिमा एकपटक...
नेपालीको मासिक आम्दानी १२ हजार पुर्‍याउने हो भने…
हरेक नयाँ युगलाई पछिल्लो युगले आˆना उपलब्धि र अनुभवबाट सिकेका पाठ हस्तान्तरण गर्दै सही बाटो पहिल्याउन मार्गदर्शन गर्दछ । नेपालसँग पनि योजनावद्ध आर्थिक विकास प्रयासको आधा शताब्दी भन्दा लामो अनुभवको संगालो र दस्तावेज छ...
कृषि मन्त्रीलाई कुखुरा व्यवसायीको खुल्लापत्र
मन्त्रीजी, हाम्रो खोरमा कुखुरा नभएको एक महिना बितिसक्यो, अर्को महिनादेखि पत्रिकाहरुमा ऋण नतिर्नेहरुको सूचिमा हाम्रो तीन पुस्ते नाम र फोटो आउनेछ । हामी र हाम्रा पुर्खाले खून पसिनाले सिँचेको जायजेथा लिलाम हुने अवस्थामा छ...
खोला वारिपारि गोलमेचको भ्रष्टीकरण !
राजनीतिशास्त्रमा बेलाबखत नारालाई भ्रष्टीकरण गरेर समसया समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । अहिले 'गोलमेच सम्मेलन'को नारा नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छ । तर, वास्तविकरुपमा हैन, भ्रष्टरुपमा । विहीबारदेखि सत्तापक्ष र आन्दोलनरत दुबैपक्षले 'गोलमेच सम्मेलन' गर्ने सहमति...
आर्थिक पत्रकारिता र विज्ञापनदाताको सम्बन्ध
नेपालमा आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्र र आयाम सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै समय सापेक्ष विकास हुँदै आएको छ । डेढ दशकअघिसम्म आर्थिक पत्रकारिताको अभ्यास र अहिलेको अभ्यासमा निकै अन्तर आइसकेको छ । अहिले भइरहेको अभ्यास कति...
नारी स्वतन्त्रता विवाहको बिघटन
नारीले कसैकी श्रीमती भएर जब गृहत्याग गरी, त्यसै बेलादेखि ऊ पराधीन, दासी र परनिर्भर स्वतः हुन पुगी । विवाह बन्धनमा नारी बाँधिदा न त उसको पिताले नै यो कुरो विचार गर्‍यो, त न नारी...
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा नेपालको भूमिका
नेपालमा गोर्खाल्याण्डजस्तो आन्दोलन भएको भए अहिले हामी कस्तो मोडमा हुन्थ्यौं होला ? यसो कल्पना गरौं त ? नेपालमा भारतीय दूतावास, भारतीय राजनीतिक दल तथा नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्नेहरुको चलखेल भइरहेको हुन्थ्यो । भारतीय मिडियादेखि...
नेताज्यू, मत माग्दा चन्दादाताको नाम सुनाउने कि ?
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव आउन लागेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भोट माग्दै जनताका घरदैलोमा जाने तयारीमा छन् । चुनावमा नेताहरुले चुनाव खर्चको पनि जोहो अवश्यै गर्न थालेका छन् । तर, कुनै पनि दलले व्यक्ति...
भारतमा धेरै मान्छे गोर्खाल्याण्डको मुद्दाका विषयमा उत्सुक छन् । तर, धेरैलाई यो विषयमा यथार्थ कुरा थाहा छैन र अधिकांशलाई के भ्रम परेको छ भने गोर्खाल्याण्डलाई भारतबाट छुट्टाउनका लागि गोर्खाहरुले यस्तो माग गरिरहेका हुन् ।...